Sandrah Koko : trandrahina ny mozika nentim-paharazana | NewsMada
Sandrah Koko : trandrahina ny mozika nentim-paharazana
I Sandrah Koko, anarana sy endrika tsy vaovao intsony eo amin’ny mpankafy mozika mafana. Mpanakanto mirona amin’ny fanandratana avo ny mozika nentim-paharazana malagasy avy amin’ny lafivalon’ny Nosy izy. Ny mampiavaka azy, ezahiny hanaraka ny toetrandro izany, satria tanjony ny hitondra ny mozikany eo anivon’ny tsena iraisam-pirenena.
Miisa 20 mianadahy izy ireo no ao anatin’ny tarika Sandrah Koko. Misy amin’ireo ny mpandihy. Tsy ny feon-javamaneno ihany no mampientanentana ny mpijery fa eo koa ny dihy sy ny fanentanana entina eny an-tsehatra. Ankoatra ny maha mpanakanto azy eo amin’ny mozika, manana fahaizana amin’ny famoronana lamaody ihany koa i Sandrah Koko.
Izy ihany, araka izany, no mamorona ireo didin’akanjo tazana anatin’ireo rakitsary efa vitany, toy ny “Eo ianao taraiky” sy ny “”Ambila Zaho”. Amin’ny ankapobeny, tsy misaraka amin’ny zava-misy eny anivon’ny fiarahamonina ny hafatra ambarany anaty tononkira. Tsy hadinony ihany koa anefa ny mampahafantatra ireo soatoavina malagasy.
Singanina amin’izany ny fampahafantarana ny lanjan’ny atao hoe “Vodiondry” eo amin’ny Malagasy sy ny fanehoana mivantana eny an-tsehatra ny fomba fitafy nentim-paharazana. Anisan’ireo namolavola an’i Sandrah Koko i Seva, mpanakanto avy any atsimon’ny Nosy, izay manana ny maha izy azy eo amin’ny fitendrena ny « mandoline » sy ny fananana feomanga.